शेरधन राईले छेक्न सकेनन् अविश्वासको प्रस्ताव ! - A2Z Online Khabar A2Z Online Khabar
शेरधन राईले छेक्न सकेनन् अविश्वासको प्रस्ताव !
विराटनगर, फागुन ९ : प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी आइतबार विहान मुख्यमन्त्री शेरधन राईको निवासमा पुगे । उनको निवासबाट प्रदेशसभा जाने क्रममा बाटोमा मुख्यमन्त्रीको निवास पर्छ, त्यही क्रममा उनी आफैं समय मागेर मुख्यमन्त्रीकहाँ पुगे ।
सभामुख भण्डारीले आइतबार दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठक रोक्न नसक्ने जानकारी गराए । राईले भने आफूहरुले १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको भन्दै वैधानिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाएकाले बैठक बस्न नमिल्ने बताए । तर, सभामुख भण्डारी बैठक रोक्न तयार भएनन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले १२ पुसमा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो । बैठक बस्नुअघि सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा भएका दलका नेताहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरे । तर, ओली समूह छलफलमै आएन । ओली समूहका नेताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा थिए ।
भेटपछि मन्त्री कार्कीले आफूहरु प्रदेशसभाको गतिरोध छिटो टुंग्याउन तयार रहेको बताए । तर, राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानूनीरुपमा एक नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जब कानूनी रुपले दल एउटै छ भने दलभित्र उत्पन्न भएको राजनीतिक समस्यालाई कानूनी रुपमा कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने खोजिनुपर्छ ।’
आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीको आशय कम्तिमा नेकपाको वैधानिकता विवाद नटुंगिँदासम्म अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि नबढोस् भन्ने थियो । तर, कांग्रेस र प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले बैठक बस्नुपर्ने अडान लिएपछि मध्यमार्गी बाटो रोजे, अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्न दिने र सरकारलाई केही दिन समय दिने गरी अर्को बैठक राख्ने ।
अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दै आङ्बोले पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेको र मुख्यमन्त्री राईले त्यसलाई समर्थन गरेकाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, प्रदेशसभा सदस्यहरु जसमाया गजमेर, गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, बसन्तीदेवी यादव र कला घलेले आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिइसकेको बैठकमा सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए ।
ओली समूहले पार्टी विभाजनले कानूनी मान्यता नपाउँदासम्म अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो । बैठक बस्ने भए संसदीय दलका नेता शेरधन राईले कारबाही गरेका १६ प्रदेशसभा सदस्यलाई बैठकमा सहभागी गराउन नहुने र अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए ।
तर, आइतबार प्रदेशसभा बैठक बसेर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि दुबै माग पूरा भएनन् ।
यससँगै ओली समूह सभामुख भण्डारीसँग रुष्ट बनेको छ । प्रदेशसभा बैठक राखेर सभामुखले विधि प्रक्रिया मिचेको ओली समूहका नेता तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताए ।